Mifampihaika Amin’ny Fomba Famonoana Biby Havadika Ho Hena Ataon’ny Orinasa Ny Fitomboan’Isan’Ireo Mpitia Biby An-Trano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2016 6:50 GMT
Ity lahatsoratra nasian'i Nguyễn Linh Chi fanovana ity dia avy amin'ny Loa, tranonkalam-baovao tsy miankina sy mpandefa tantara am-peo momba an'i Vietnam, ary navoaka ato amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Araka ny filazan'ny Asia Canine Protection Alliance (Firaisamben'ny Fiarovana Alika ao Azia), alika eo amin'ny dimy tapitrisa eo no maty isan-taona atao hena ao Việt Nam. Mametraka ity firenena kely atsimo atsinanana ity ho faharoa amin'ny lisitry ny firenena Aziatika mihinana henan'alika, aorian'i Shina, izany tarehimarika izany.
Milaza i Catherine Besch, iray amin'ireo mpiara-manorina ny Fikambanana Ho amin'ny Mahasoa ny Biby ao Vietnam (VAWO) ao Hội An, ao afovoan'i Việt Nam, fa iray amin'ireo olana lehibe indrindra ny fanabeazana. Anisan'ireo tanora marobe miaro biby izay mazoto miasa hahatonga an'i Việt Nam ho toerana naman'ny biby kokoa ny VAWO.